Iris, hevitra robot miorina amin'ny endrika iMac G4 | Avy amin'ny mac aho
Iris, hevitra robot miorina amin'ny endrika iMac G4
Miharihary fa rehefa miresaka momba ny robot na robotika amin'ny ankapobeny isika dia tsy afaka manilika ny hevitra tsy ho ela satria ny masinina dia ampahany amin'ny andavan'andro antsika. Izany no antony ankehitriny andao jerena ny konsep robot naorin'i Curved Iris no anarany (izay tena mifanohitra amin'i Siri) izay mamela antsika hanao hetsika samihafa raha hiditra ao an-trano izy io. Mazava ho azy fa foto-kevitry ny robot ity, izay midika fa tsy misy izy ankehitriny ary tsy ampoizina ny hanao izany indray andro any, fa mahaliana anay ny mahita ny endriny mitovy amin'ny jiro-lac iMac G4- sy ireo fiasa afaka nanao izany.
Amin'izao fotoana izao dia azontsika atao ny milaza fa ity fotokevitra ity dia samy hafa ny asany ary eo amin'ny farany ambany dia manana karazana sehatry izay ahafahan'ny robot mitazona fifandanjana ary mihetsika amin'ny fomba mitovy amin'ilay ataony. ny penina BB-8 Droid malaza. Etsy andaniny, manana mpanadio banga kely ao ambany isika mba hanaovana fanadiovana kely (miaraka amin'ny bokotra tokony hosokafana sy vatasarihana kely hitehirizana ny vovoka), eo amin'ny sisiny dia misy mpandahateny stereo Beats, a pointer tamin'ny laser ary miharihary fa efijery LCD eo an-tampony izany dia hampahatsiahy antsika ny fotoana nifanarahana, mampiseho fifandraisana, hampiseho amintsika ny toetrandro sy ny maro hafa.
Eto izahay dia mamela horonantsary kely noforonin'i Curved:
Miaraka amin'ireo kojakoja rehetra ireo dia afaka mandray baiko amin'ny alàlan'ny feo ny Iris ary ny HomeKit dia hifanaraka tanteraka. Ny hevitr'i Apple (izay tsy misy ifandraisany amin'ity fotokevitra ity) amin'ity lafiny ity dia ny manohy mandroso amin'ny faritra hafa toy ny fiara marani-tsaina, saingy tianay io robot io amin'ny famolavolana toy ny amin'ny fizarana miasa sy ireo an'i Cupertino dia afaka miasa mangina eo amboniny. Mazava ho azy fa misalasala isika fa hamboarina ankehitriny ary foto-kevitra fotsiny io, fa tena tianay ny famolavolana sy ny fiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Iris, hevitra robot miorina amin'ny endrika iMac G4
Mandra-pahoviana ny batterie iPhone 7 sy 7 plus?
Surface Pro 4 raha ampitahaina amin'ny MacBook Air amin'ny doka